Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Page 3 – Radio Daljir
(2) K2 Black Panther (South Korea – Kuuriyada Koonfureed)
Black Panther waxaa sanceeya Kuuriyada Koonfureed waana taangiyada maanta adduunka ugu casrisan, kana baardheer taangi kasta oo Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay la soo shir tagaan ama ku soo dagaal galaan. Intaas kaliya ma aha e waa taangiga adduunka ugu qaalisan.
Ciidamada Kuuriya Koonfureed waxa ay hadda ku hubaysanyihiin 300 ku dhawaad noocaas tangiga Black Panther, waxaan la qorshaynayaa in ay baddalaan dhammaan noocyadii hore ee K1-ka.
Taangiga Black Panther waxba kama tari karto xabadda 120 mm ee laga rido qoriga weyn ee L55, waana isla qoriga uu tangigu ku hubaysanyahay. Intaas kaliya ma aha e haddii sawaariikh lagu soo rido waxa uu leeyahay qalab uu iskaga difaaco oo aanba meel u dhow ku soo dhici karin. Taangiga oo taangi waduhu uusan ka warqabin waxa uu kaligii awood u leeyahay in uu iska difaaco wixii aaggiisa u soo dhawaada, xataa diyaaradaha sida helikobtarka ee ku socda jawi hoose.
Maqaalo Kale 301 Wararka 20705